निर्मलाको हत्या बम दिदीबहिनीकै घरमा, भयो ठुलो खुलासा ! - Experience Best News from Nepal
निर्मलाको हत्या बम दिदीबहिनीकै घरमा, भयो ठुलो खुलासा !
कञ्चनपुर भीमदत्तनगरकी १३ वर्षीय बालिका निर्माला पन्तको हत्या बम दिदीबहिनीकै घरमा भएको अनुमान गरिएको छ । सर्वत्र यही खालका तर्क र अाशंका व्यक्त भैरहेको बेलामा नेपाल प्रहरीका एक पूर्व अधिकृतले निर्मलाको हत्या बम दिदीबहिनीकै घरमा भएको र त्यसपछि प्रमाण मेटाइएको बताएका छन ।
घटनास्थलको प्रकृति र त्यसपछि स्थानीयहरूले दिएको प्रतिक्रिया सबैको संशलेषणा गर्दा पूर्व प्रहरी अधिकृत बिजयकुमार श्रेष्ठले गरेको यो तर्क सत्यको नजिक देखिएको छ । त्यसकरण हामीले श्रेष्ठको तर्क जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तु गरेका छाैँ ।
म हाल कुनै अनुसन्धान अधिकृत होइन । तर कुनै पनि घटनालाई मनोगत रुपमै ८ कोण र तल माथीबाट बिश्लेषण गर्छु । निर्मला पन्त प्रकरणमा हालसम्म देखीएका घटना प्रकृति अनुसार १० गतेका दिन निर्मलाकी आमा अपरान्ह २ बजे र ५ बजे निर्मलालाई खोज्न बबिता बमको घर पुगेको समयमा निर्मलाको जीवित वा मृत शरिर बबिता बमको घरभित्रै थियो । त्यहाँ जुन दुखद घटना घट्यो, त्यो भुईँ तलाको पछाडी पट्टीको कोठामा घटेको हुनुपर्छ । किनभने पछाडीको कोठाबाट अगाडीको सडकमा आवाजको गुञ्जन पुग्न सक्तैन, पुगिहाले पनि अस्पष्ट हुन्छ ।
युट्युबमा देखिएको निर्मलाको शरिरको कुनै पनि भागमा फोका, मुसा लगाएतका साना जीवको दाँतको दाग र छाला खुइलिएको तथा निलो दाग देखिएको थिएन । मानिसको बिहानको चहल पहल शुरु हुनुभन्दा अगाडी र स्यालहरुले आफ्नो बासस्थानमा फर्किने समयमा उक्त लास फालेकोले न कुनै मानिसले देख्नसक्यो नत स्यानहरले लुछ्ने समय पायो । यस घटनाका अपराधीसम्म पुग्न घटना क्रमले योजनाकारको रुपमा देखाएका सम्पूर्ण घटनाका जानकार बम दिदी बहिनीबाटै अनुसन्धान टोलीले गन्तब्य फेला पार्नसक्नेछ ।